Spiro ny vokatra Apicmo mpamokatra biochemical cdmo
Products > Spiro composites
Inona avy ny firaisana Spiro?
Ny firafitry spiro (antsoina hoe spiranjy) dia singa mahazatra mifototra amin'ny organika sy simika misy tsiranoka misy rantsana mihoatra ny iray. Eto, ireo raozy dia mifamatotra miaraka amin'ny atoma iray izay mahazatra ny rehetra. Raha ny marina, ny anarana hoe "spiro" dia nalaina avy amin'ny teny latinina spīra, izay midika hoe bobongolo na kofehy.
Ny karazam-borona fototra tena goavana indrindra dia bicyclic, izay manana rafitra roa. (bi midika hoe roa). Na, afaka manana bicyclic ampahany izay ho ampahany kely amin'ny rafitra ringing kokoa. Na inona na inona ny ampahany, ny peratra rehetra dia mifamatotra amin'ny alalan'ny atôma iray miavaka izay mahazatra ho an'ny rehetra.
Ny Spirane dia mety indraindray feno karbocyclic na heterocyclic. Ny carbocyclic dia midika hoe ny kofehy rehetra dia karbaona, fa ny heterocyclic dia midika fa ny atiny dia manana atôma iray na mihoatra tsy misy karbôna.
Ny endriky ny hoditra dia manana lisitry ny zava-mahadomelina isan-karazany. Ny zava-mahadomelina dia voatanisa etsy ambany -
Karazana Spiro samihafa
Araka ny rafitra boribory, dia mbola mizarazara ho azy ireo ihany koa ny spirane.
1.Carbo- sikilezy Spiro Compound
2.Hetero- cyclo Spiro Compound
Ireo spiro ampiasaina dia ampiasaina manerana an'izao tontolo izao. Ny sasany amin'ireny fitaovana ireny dia nampiasaina betsaka ho fitaovana ampiasaina amin'ny fianarana amin'ny sehatry ny biomedical. Ireo fitaovana ireo dia ampiasaina ho toy ny rafitra ho an'ny fanampiana ara-pahasalamana, amin'ny asa atao toy ny fitaovana.
Famaritana momba ny zava-mahadomelina eo ambanin'ny Spiro Components
Ny isa amin'ny fidirana amin'io zava-mahadomelina io dia DB00490. Buspirone dia an'ny classroom azaspirodecanedione, izy io dia agonista mpanome serotôna ary mpitsabo mpanampy. Ary koa, ny zava-mahadomelina dia manana fahombiazana izay azo ampitahaina amin'ny an'ny diazepam.
Ny fanafody dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana sy ny aretin'ny tebiteby.
Ny isa amin'ny fidirana amin'io zava-mahadomelina io dia DB04842. Ny karazana molecule kely iray, ity medikaly ity dia mpitsaboka antipsychotic izay maharitra ary azo alaina. Fluspirilene dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina mitaiza.
Ny isa amin'ny fidirana amin'io zava-mahadomelina io dia DB00693. Ankoatra ny fampiasana zava-mahadomelina sy fitaovana fitsaboana ho an'ny tanjona ivelany, io fanafody io dia ampiasaina koa ho fanampiana ny traumatique ho an'ny havokavoka ary ny ratra vokatry ny tebiteby. Izy io dia loko fotsy malemy fotsy mavo mena-maso raha ao anaty sarimihetsika mahatsiravina. Nefa, mety manjary maitso miloko marefo amin'ny fampiasana lasantsy misy alika toy ny hatsikana mivaingana.
Ny laharana fidirana amin'io zava-mahadomelina io dia DB13911. Phloxine B na Phloxine dia loko fanampiny. Izy io dia mampiasa loko iray amin'ny famoahana takelaka (toeram-pandihizana), ary toy ny fitaovana mangatsiatsiaka hanampy ny loko amin'ny vokatra. Amin'io tranga io, ny takelaka dia manampy ny marary haka sary an-tsaina ny faritra izay takiana amin'ny fingotra / biriky.
Ny isa amin'ny fidirana amin'io zava-mahadomelina io dia DB12030. Izy io dia molekiola kely izay matetika ampiasaina amin'ny fitsapana ho an'ny sehatra samihafa. Ny famantarana ny hepatitis, viral, Human, Stealhepatitis nonalcoholic, hepatical cirrhosis, pharmacokinetics, ary ny tsy fihinan'ny voankazo dia ny saha.
Mampiseho ny rehetra 6 vokatra